Maxbuus Filastiini ah oo ku geeriyooday Xabsiyada maamulka Yahuudda. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Maxbuus Filastiini ah oo ku geeriyooday Xabsiyada maamulka Yahuudda.
On Nov 26, 2019 304 0
Hay’adda qaabilsan arimaha Maxaabiista ee Filastiin ayaa ku dhawaaqday inuu geeriiyoday maxbuus kamid ah kuwa ugu waqtiga dheer ee ku xirnaa xabsiyada maamulka Yahuudda ee xooga ku heysta dhulka Muslimiinta ee Filastiin.
Masuulka Hay’adda oo la hadlay Warbaahinta ayaa shaaca ka qaaday inuu geeriyooday Saami Abuu Diyaak oo kamid ah maxaabiista u xirnaa maamulka Yahuudda, kaas oo mudooyinkii u dambeeyey la xanuunsayay cudurka Kansarka.
Maamulka Xabsiga uu ku xirnaa maxbuuskan ayaa qoyska Abuu Diyaak soo gaarsiiyay inuu geeriyooday wiilkooda, kaas oo lagu dabiibayay sida ay Yahuudu sheegayaan isbitaal ku yaala gudaha xabsiga Ar-ramla.
Maalmihii lasoo dhaafay waxaa siyaado looga deryinayay xaaladda caafimaad ee maxbuuskan, waxayna Yahuudu diideen in lasii daayo, si loogu daweeyo isitaallada gaarka loo leeyahay.
Yahuudda waxaa u xiran kumanaan maxaabiis Muslimiin Fialstiiniyiin ah, kuwaas oo si dulmi ah loogu hayo xabsiyadaas, waxaana ku jira dumar iyo caruur aan waxba galabsan.